တရုတ် Simatech - situ ပိုး Fibroin Gel ပစ္စည်းများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်
အဆိုပါကိရိယာအစုံတွင်ပေးထားသော lyophilized ပိုး fibroin လျင်မြန်စွာဆေးထိုးပိုက်ကို အသုံးပြု. ကိရိယာအစုံနှင့်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ adapter အတွက်ထောက်ပံ့ပေးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူရောနှောပြီးနောက်ဟိုင်ဒရိုအသွင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ရသောဖြေရှင်းချက်သို့ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အခြားရွေးချယ်စရာအမည်: Injection ပိုး fibroin hydroge
အဆိုပါကိရိယာအစုံတွင်ပေးထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ဦးကလျင်မြန်စွာဆေးထိုးပိုက်နဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့ adapter သုံးပြီးစိတျအပိုငျး B, နှင့် C နှင့်အတူရောနှောပြီးနောက်ဟိုင်ဒရိုအသွင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ရသောဖြေရှင်းချက်သို့ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဂျယ်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စေတစ်ခုလုံးကိုခြယ်လှယ်5မိထက်လျော့နည်း, သို့မဟုတ်ပါကတတ်နိုင်သမျှနိုင်အောင်ဂျယ်ထုတ်လုပ်သူများကကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆေးထိုးပိုက်သို့မဟုတ်ပြွန်ထဲမှာ Pre-ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ, (situ-ဖွဲ့စည်းမှာ) အသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအားဖြင့် site ပေါ်တွင်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါစေ။ အဆိုပါ applications များပေါ် မူတည်. အဆိုပါ In-situ ဖွဲ့စည်းဟိုင်ဒရိုစသည်တို့နှင့် Vivo လေ့လာမှုများအတွက်ဆဲလ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး encapsulation တွေကိုသေချာနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့စံပြအရှင်, တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုအကွာအဝေးအတွင်း 1-30% ကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကို C Kit ၏ omponents
components properties ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ဂဏန်း ပြင်ထုပ်ပိုး
component တစ်ခု အဖြူအမြောက်အများရေမြှုပ် 0.3 g / ဖလားကို2penicillin ဖလားကို
component B ကို အရောင်မဲ့ပွင့်လင်းအရည်, မြုံ
8 mL 1 penicillin ဖလားကို
component ကို C အရောင်မဲ့ပွင့်လင်းအရည်, မြုံ 8 mL 1 penicillin ဖလားကို
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Luer adapter ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း / 1 မြုံတံဆိပ်ခတ်အထုပ်
မြုံပြွတ် ပိုးမွှားမရှိသော 20 mL2မြုံတံဆိပ်ခတ်အထုပ်
ဇယား 1 Parameter, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဈ၏နည်းလမ်း ဎ situ ပိုး fibroin ဂျယ်လ်ပစ္စည်းများဖွဲ့စည်း
parameter, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Method ကို situ ခုနှစ်တွင်ပိုး fibroin ဂျယ်လ်ပစ္စည်းများဖွဲ့စည်း
အမျိုးအစား ပစ္စည်းများ / ကိုယ်စားလှယ်
ပုံသဏ္ဌာန် gel Kit
အရင်းအမြစ် Degummed Bombyx Mori silkworm
သိုလှောင်မှု Method ကို အခန်းအပူချိန်မှာခြောက်သွေ့လေဝင်လေထွက်အရပ်ဌာန၌သိုလှောင်ခြင်း
Gelling အချိန် ≤ 30 မိ
Bioburden (အစိတ်အပိုင်းများနှုန်း) ပိုး
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် 18 လ
situ-ဖွဲ့စည်းနှင့်ထိုးဆေးပိုးဟိုင်ဒရိုထဲမှာတစ်ရှူးအင်ဂျင်နီယာ / ပြုပြင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပို့ဆောင်မှုအတွက်သုတေသနများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆဲလ်ပေးပို့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကယ်နှုတ်ခံရဖို့အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဆဲလ်တွေအလျင်အမြန်ဟိုင်ဒရိုဖွဲ့စည်းရန်ကိရိယာအစုံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူပွနျလညျပိုး fibroin ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ထပ်မံရောထွေးနှင့်အတူ Pre-ရောထွေးစေနိုင်သည်။ ပိုးဟိုင်ဒရိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စက်မှုခွန်အားဓာတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု, biocompatibility နှင့် degradation ပေးခွငျးအားဖွငျ့အခွားသော biomaterial ဟိုင်ဒရိုကနေပုံမှန်ပါပဲ။
ယခင်: Factory Price Silk Fibroin Porous Scaffold to UK Importers
နောက်တစ်ခု: အဲဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ Lyophilized ပိုး Fibroin
Regenerated ပိုး Fibroin Gel
Regenerated ပိုး Fibroin ဟိုင်ဒရို
သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးပိုး Fibroin ပရိုတိန်း Gel
ပွနျလညျပိုး Fi ကို broin ပရိုတိန်းဟိုင်ဒရို
Regenerated ပိုးပရိုတိန်း Gel
ပိုး Fibroin Gel
ပိုး Fibroin ဟိုင်ဒရို
ပိုး Fibroin ပရိုတိန်း Gel
ပိုး Fibroin ပရိုတိန်းဟိုင်ဒရို